Lego BrickHeadz တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးတွင်စာရင်းနွေရာသီအစုံ
16 / 05 / 2021 16 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 405 Views စာ0မှတ်ချက် 40476 Daisy ဘဲ, Huey Duey & Louie နှင့်အတူ 40477 Scrooge McDuck, 40479 Dalmatian, 40495 Harry Hermione Ron & Hagrid, 40496 Voldemort Nagini & Bellatrix, BrickHeadz, Lego, Lego BrickHeadz, နွေရာသီ, နွေရာသီ 2021
၏နွေရာသီအကွာအဝေး Lego BrickHeadz set တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြခန်းတစ်ခုလုံးနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်နေ့ရက်များကိုပြသခြင်း၊
သင်ယခုလာမည့်ရွေးချယ်မှုအပေါ်အများကြီးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Lego BrickHeadz မော်ဒယ်အသစ်များအတွက်တရားဝင်ပုံများကို p အဖြစ်တင်ထားသည်art သူတို့ရဲ့တစ် ဦး ချင်းစီစာရင်း၏ LEGO.com.
ဤနွေရာသီတွင်ကဏ္ sets ငါးခုသည်ခေါင်းစဉ်ခွဲသုံးခုကို ဖြတ်၍ အဓိကချိတ်ဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် Disney, ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ။ ဤအရာအားလုံးအားဖြင့်ထင်ရှားပါပြီ အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များ နှင့် အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဒါပေမယ့်ဒီဟာကနေသူတို့ဆီကအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုတိုက်ရိုက်မြင်တာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ Lego Group မှ။
Disney ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု၏တစ်ခုတည်းသောဇာတ်ကောင်လေးခုပါ ၀ င်သည့် Theme ၏ quad packs အသစ် ၂ ခုအနက်မှတစ်ခုပါဝင်သည်။ ဤသည်သည်သုံး၏ယခင်စံချိန်ချိုးတော်မူ၏ BrickHeadz တစ်ခုမှာ တည်ဆောက်မှု၏တိုးနှင့်အတူစျေးနှုန်းတစ်ခုတိုးလာလာပါတယ် အသစ်အစုံ £ 21.99 / $ 24.99 / € 24.99 မှာစာရင်းဝင်။
DuckTales မှခွေးအမြီးများအထိ၊ Lego BrickHeadz အပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နွေရာသီအစုံ LEGO.com သူတို့ဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်ပြန်လွှတ်ပေးရန်မီ
40476 Daisy ဘဲ
40495 ဟယ်ရီ, Hermione, Ron & Hagrid
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego BrickHeadz ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးမော်ဒယ်များ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၈ Hogsmeade Village ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လာရောက်ပါ
LEGO Creator ရဲတိုက်အသစ်သည် LEGO.com တွင်နေထိုင်သည် →